पहुँचवालालाई घरमै कोरोना खोप, घण्टौँ लाम लागेर ज्येष्ठ नागरिक खोपबिना नै घर फिर्ता
काठमाडौं। नेपालमा उमेर, वर्ग र पेसाका आधारमा लक्षित समूह तोकेर कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। तर, लक्षित समूहमा रहेका नागरिकले सहज रूपमा खोप लगाउन पाएका छैनन्। घण्टौं लाम लागे पनि ज्येष्ठ नागरिक नै त्यत्तिकै घर फर्किएका थुप्रै उदारहण छन्। पहुँचवालाले भने सहजै घरमै पनि खोप लगाउन पाएका छन्।
खोपको आसमा रहेका ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोपमा पहुँच र्पुयाउन धौ–धौ देखिएको छ। विश्वभर साढे ३ अर्बभन्दा बढी व्यक्तिले खोप लगाउँदा नेपालमा ४.३ प्रतिशतले मात्र पाएको देखिन्छ। कोरोना भाइरसबाट जोगिन १८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकको नजर खोपमै केन्द्रित छ। देशव्यापी रूपमा २९ असारदेखि खोप अभियान सञ्चालन गरिए पनि कतिपय जिल्लामा स्थगन गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा सफल भएका र गुणस्तरीय खोप नै नेपाल ल्याइएको छ। खोपको गुणस्तर कायम राख्दै खोप अभियान चाँडो सक्न प्राथमिकतामा राखेको डा.अधिकारीको भनाइ छ। जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले मान्यता दिएका खोपहरू मात्र ल्याएर प्रयोग गरिने उनी बताउँछन्।
‘१८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिका लागि बनाइएका खोप ल्याएर ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई लगाउने तयारी छ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार १२ देखि १८ वर्षसम्मका व्यक्तिको हकमा अरु मुलुकमा सफल भएका खोप प्रयोग गर्न सकिने गरी योजना बनाइँदै छ।
संक्रमणपछि मृत्युदरमा कमी आएको थियो। सहभागीमध्ये ७१ जनाले कोभ्याक्सिन र ६०४ जनाले कोभिसिल्ड खोप लगाएका थिए। २ जनाले चीनको सिनोफर्म खोप लगाएका थिए। यी सहभागीमध्ये ३ जनाको ज्यान गएको थियो। अध्ययनअनुसार ९.८ प्रतिशत व्यक्ति खोप लिइसकेका र अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेको थियो। जबकी, ०.४ प्रतिशत संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। उक्त अध्ययनले खोपले सुरक्षा प्रदान गर्ने कुराको स्पष्ट भएको छ।
नेपालमा चीन र भारतबाट अनुदान र खरिद गरी ल्याइएका खोपले सर्वसाधारणलाई खोपमा पहुँच र्पुयाएको छ। भारत र चीनले अनुदानमा खोप दिएका छन्। त्यस्तै ती मुलुकबाट खोप खरिद गर्ने कार्य पनि अघि बढेको छ। भारतबाट १०लाख मात्रा अनुदानमा उपलब्ध भएको थियो। खरिद गरेको १० लाख डोज पनि उपयोग गरिएको छ। भारतले नेपाली सेनालाई थप १ लाख डोज उपलब्ध गराएको थियो। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिमरुपमा पैसासमेत तिरिसकिएको १० लाख डोज अझै आएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भुक्तानी दिइसकेको १० लाख डोज खोप दिने आस्वासन दिएका छन्।
चीनले पनि हालसम्म १८ लाख डोज खोप सहयोग गरेको छ। त्यस्तै चीनबाट खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत थप खोप लिन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चीन जाँदै छ। यसै साताभित्र १६ लाख खोप आइपुग्ने जनाइएको छ। साउन १५ गतेभित्र कम्तीमा ३२ लाख र त्यसपछि निरन्तर खोप नेपाल आउने क्रम जारी रहने जनाइएको छ। ‘हामी सबैले खोप लगाउन पाउनेछौं। त्यसैले सबैलाई संयमित भई खोप अभियान सफल बनाउन अनुरोध गर्दछु’, उनी भन्छन्।
हाल भेरोसेल लगाउने वर्गमा ५५ वर्षभन्दा माथिका खोप नलगाएका व्यक्ति छन्। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक, सहचालक, सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, खोप अनिवार्य गरेको मुलुकमा जाने नेपाली छन्। सहप्रवक्ता डा।. अधिकारीका अनुसार साउन ६ गतेदेखि खरिद गरिएका थप खोप चीनबाट निरन्तर रूपमा ल्याइँदै छ। कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार मात्रा खोप पनि ल्याइएको छ। यस्तै अमेरिकाले कोभ्याक्सअन्तर्गत १५ लाखभन्दा बढी डोज उपलब्ध गराएको छ।
यो खोप लगाउने समूहमा ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका एक मात्रा पनि खोप नलगाएका व्यक्तिहरू पर्छन्। पूर्ण, अति अशक्त (वर्ग क र ख) अपांगता भएकाहरू, शरणार्थी, स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई तोकिएको छ। त्यस्तै यो खोप अनिवार्य गरिएका राष्टहरूमा जाने व्यक्तिलाई सोहि खोप प्रदान गर्नुपर्नेछ। खोप केन्द्रमा जाँदा आवश्यक कागजात ९पासपोर्ट र भिसा० पनि सँगै लिएर जानुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामकुमार बस्नेतले मापदण्ड मिचेर विराटनगरस्थित सिटी सिनेमा हलमा नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी र व्यवसायीसमेत निश्चित व्यक्तिलाई गोप्य हिसाबले खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइदिए। करिब ३ सय जनालाई दोस्रो डोज खोप दिने तयारी भइरहँदा कुरा बाहिरिएपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिए। खोप बोक्न प्रयोग गरिएको बा.१झ ९३६५ नम्बरको गाडी, खोप लगाइदिन पुगेका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तथा लगाइमाग्न गएका पहुँचवालालाई सुरक्षा दिन प्रहरीलाई हम्म र्पयो।
खोप कार्डमा खोपको नाम, लगाएको मिति, अर्को पटक लगाउनुपर्ने मिति उल्लेख छैन।पहुँचवालालाई दिन हतारो हुँदा बिहेको कार्ड जसरी बाँडिएको अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार खोप लगाउनेहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिइएको छ।
यस विषयमा बुझ्न बिहीबार फेरि नगरपालिका कार्यालय जाने उनको भनाइ छ।नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत नगेन्द्र पौडेल ४ हजारभन्दा बढीले खोप लगाइसकेको र बीचमा धेरै भएर ७ सय भायल खोप फिर्तासमेत गएको बताउँछन्। ‘मेयर साहेबले भनेर कोही विदेश जाने वा अत्यावश्यक परेकाहरूले लगाए होलान्। तर, खोपको दुरुपयोग भएको छैन,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार हालसम्म खोपको दुवै डोज भने ९९ हजार ६ सय ७७ जनाले मात्रै लिएका छन्। ‘दुईवटै खोप दुवै डोज लगाउनुपर्ने हुन्छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘पहिलो डोज लगाउनेको तुलनामा दोस्रो डोज लगाउनेको संख्या निक्कै कम छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ।